Sorbet mandarin - Recipe Thermomix | ThermoRecipes
zava-pisotro2 minitraOlona 8
Ity sorbet mandarin ity dia kilalao Krismasy. Raha vantany vao tonga ny fotoana izay mamy ny mandarin, dia mividy kilao vitsivitsy foana aho ary mamporisika ny tenako miaraka amin'ireo zanako kely mba hibontsina azy ireo ary hanao fonosana ½ kilo ho an'ny hatsiaka izy ireo.
Mandritra ny herinandro dia tsy misakafo ao an-trano izahay fa amin'ny faran'ny herinandro dia tiako sy ny vadiko ny mankafy aorian'ny sakafo. gilasy na sorbet. Noho izany, tamin'ny faran'ny herinandro dia nikasika sorbet tangerine izy.
Manan-karena tokoa ny fivoahany! Toy ny mahazatra dia nahalasa adala anay izany. Zavatra mahafinaritra ihany koa mety amintsika, manampy antsika hanatsara ny fandevonan-kanina. Afaka minitra roa dia vonona hisotro ihany koa izy.
Manoro hevitra anao aho mba hampangatsiaka ny voankazo hanomanana sorbet koa tsy mila ranomandry ianao ary mankafy ny tsiron'ny voankazo rehetra zato isan-jato ianao.
Ny tsara indrindra amin'ny voankazo mangatsiaka dia ny manampin-tsofina ireo fizarana na ireo sombin-javatra misaraka amin'ny lovia ary rehefa tafapetraka dia azontsika atao ao anaty kitapo. Zava-dehibe ny tsy hametrahana azy ireo ao anaty kitapo mivantana satria hivaingana ny fananganana sakana ary tsy ho tsara ny sorbet-tsika.
Ny hany zavatra ilay sorbets miaraka amin'ny voankazo efa nivaingana dia voasarimakirana, siramamy ary rano kely.
Sorbets vita amin'ny voankazo dia mety amin'ny fotoana rehetra.
Fotoana hiketrehana: 2M
Fotoana manontolo: 2M
1000 g an'ny mandarin
Voasarimakirana 3 (peel tsy misy voa na faritra fotsy)
Apetrakay ao anaty vera ny siramamy ary potehinay 30 segondra, hafainganam-pandeha 5-10.
Ampiarahinay ny mandarinina mangatsiaka, ny voasarimakirana ary ny rano. Manidy ny vera izahay ary mametaka ny spatula amin'ny vava mba hivezivezy ary manampy azy io ho torotoro homogen. Tsy mandahatra fotoana amin'ny hafainganam-pandeha farany izahay ary mandinika izahay mandra-pahitantsika endrika mihosotra.
Manompo solomaso avy hatrany izahay.
Fanazavana fanampiny - Sorbety 9 mamelombelona indrindra amin'ity fahavaratra ity
Mitadiava fomba fahandro hafa momba ny: Celiac, Tsotra, Tsy mahazaka laktose, Tsy mahazaka atody, Latsaky ny 15 minitra, Navidad, Postres, Resipeo ho an'ny ankizy
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: thermorecipes » Resipeo thermomix » Postres » Sorbet mandarin
Mahafinaritra !!! Izaho koa dia manana mandarinina mangatsiaka amin'ny fitsidihana tsy ampoizina, satria vita vetivety izany ary tsara be izany!
Eny Jessie, "vehivavy mitsinjo lavitra dia mendrika roa" izany no nolazain'ny renibeko tamiko. Manana voankazo mangatsiaka foana aho, omaly dia nanao iray ho an'ny vadiko amin'ny melon. Tianay!
cello forés dia hoy izy:
Hevitra tsara handefasana voankazo, nataoko tamin'ny frezy io hatramin'ny nipetrahako tany Valencia ary manana tanimboly ny raiko ka mamboly izy ary rehefa misy frezy dia tsy rehefa mandeha mividy ianao dia misy frezy omena ary omena fa ny ny mandarin sy ny voasary dia tsy tonga tao an-tsaiko ary inona no voankazo afaka mivaingana? faly 2011
Mamaly amin'ny cello forés
Salama Chelo, manana mananasy be koa aho, pasteky ary melon. Ny ambin'ny voankazo tsy haiko hoe hanao ahoana. Miarahaba sy tratry ny taona 2011!
Mª Joses LOPEZ dia hoy izy:
Diabeta ny vadiko ary tiako ho fantatra ny fitovian'ny siramamy mifandraika amin'ny saccharin, fructose, sns, hahafahana manao an'ireny sorbet, tsindrin-tsakafo mahafinaritra sns ireny. misaotra sy arahaba
Valio amin'i Mª Joses LOPEZ
Raha diabeta ny vadinao dia tsy afaka mandray fructose izy, ny fructose dia voaforona molekiola glucose roa, misy zava-manitra hafa miasa ho anao, saccharin, aspartame, acetylsulfame, amin'ny takelaka na ranon-javatra, fantatro izay lazaiko satria mpitsabo mpanampy aho ary manokan-tena amin'ny fanabeazana ny diabeta mandritra ny taona maro aho
Misaotra betsaka amin'ny vaovao, Pilar. Marihiko rehefa misy manontany anay. Miarahaba sy mirary fety sambatra !.
Maria Carmen Marin dia hoy izy:
ny fitovian'ny siramamy sy saccharin dia: siramamy 100g = sakramarinina vovoka 10g, na dia manampy kely kely foana aza aho.
Valiny tamin'i Mª Carmen Marín
Mª José ataovy toy izao ary ho hitanao ny fitiavan'ny vadinao azy, aorian'ny fotoana voalohany, miankina amin'ny mamy izany, ampianao na esorinao amin'izay tianao. Manantena aho fa nanampy ahy.
Misaotra betsaka tamin'ny fanazavana, Mª. Carmen. Ka efa fantatro raha sanatria manontany anay ianao. Miarahaba sy mirary fety sambatra !.
Salama Mª. José, fantatrao fa miankina amin'ny tsirony izany, fa ny zavatra ankapobeny dia ny 1/10 an'ny mamy dia ampidirina amin'ny haben'ny siramamy. Ny marina dia sarotra ny milaza ny tena izy satria miankina amin'ny hatsaran'ny zavatra tiantsika. Miarahaba sy mirary fety sambatra !.
cnxy dia hoy izy:
Lalao inona no hataoko miaraka aminao ny Thermomix ko !! Misaotra betsaka amin'ity bilaogy mahafinaritra ity! Nahomby ny mofomamy rahona!
Mamaly an'i cnxy
Misaotra betsaka, Cnxy. Mila mahazo tombony betsaka amin'ny Thermomix ianao satria tsara izany. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
cardigan dia hoy izy:
Voalohany indrindra, misaotra betsaka tamin'ny bilaoginao, izay mahafinaritra ary manampy ahy isan'andro.
Avy eo manontany anao raha ataoko esorina ny sorbet (misakafo hariva any an-tranon'ny reniko aho ary tiako ny mitondra izany aorian'ny hazandranomasina ary gaga ny fianakaviako), ahoana no hitahirizako azy ao anaty vata fampangatsiahana ao amin'ny vata fampangatsiahana? Misaotra ianao tokoa
Mamaly an'i Rebeka
Ny sorbet nartadine dia tena tsara koa, ny voankazo rehetra tianao dia azo atao satria ateriko, mananasy, paiso, akondro, sns ……………. tomells, SALAMO ……………………… ..
Misaotra betsaka, Mari Carmen. Tiako ilay mananasy. Mirary ny soa indrindra.
Eleanor Parra dia hoy izy:
Lazao aminao fa misy karazany maro ny mandarinina ary samy manana tsirony sy manandrana ary veriesi ny fomba ahafantaranao ny momba izany, tamin'ny herinandro lasa dia nivarotra «orogrande» mandarin izahay, fa tamin'ity herinandro ity dia ny mandarina «clemenvilla». Hafa tanteraka, mandehana manao fitiliana dia hanankarena ireo fomba fanamboarana ireo. Miarahaba an'i Leonor
Valiny tamin'i Leonor Parra
Misaotra betsaka amin'ny vaovao, Leonor. Tiako i clemenvilla. Miarahaba sy tratry ny taona 2011!
io ricooooo io, tamin'ny mariaziko dia nomen-dry zareo sorbet slime izahay, ary mba tsy hitovizako amin'ny olon-drehetra, nangataka sorbet mandarin aho, tsara izany, misaotra anao aho fa sambany nanao ny cannelloni tamin'ny fiainako, tsara ry zareo, misaotra ianareo zazavavy be, oroka, naty
Salama Naty, faly aho fa tianao ity sorbet (sy ny cannelloni) ity. Ny marina dia ny voasarimakirana iray no mahazatra, fa misy kosa ny hafa, toa an'io, izay manankarena kokoa. Miarahaba ary misaotra betsaka anao nahita anay.
Ranomasina Guasch dia hoy izy:
Etsy an-danin'izany, manana fomba fahandro momba ny ranona voajanahary ve ianao? Nanandrana aho saingy ... tsy nety ho ahy fotsiny ...
Mamerina ny fisaorana anao!!
Valiny tamin'i Mar Guasch
Salama Mar, manana tokoa izahay, jereo ny Recipe Index, navoakanay ny ranom-boasary, ny ranom-boasary, ny ranom-boasary ary ny ranom-boasary sy frezy. Raha tianao ny malama, dia navoakanay koa ny malama sy akondro. Miarahaba ary manantena aho fa tian'izy ireo izy ireo.
Misaotra! teny an-dalana, nataoko sorbet mandarin ary fahombiazana izany! mora omanina, mahafinaritra! Hijery ny ranony aho izao, hahitana raha misy vintana bebe kokoa!
Misaotra anao indray ary… Tratry ny taona!
Salama hariva, te hanontany anao aho, raha manampy saccharin na spartan, mila manapotika azy toy ny siramamy ve ianao?
Misaotra, toy ny mahazatra, ary mirary fety sambatra ho an'ny rehetra.
Salama Blanca, ny saccharin dia efa nopotsehina saingy tiako ny manao azy raha sanatria ka misy vongan-kazo ary noho izany dia ataonay antoka fa mety tsara amin'ny sorbet izy io. Miarahaba sy mirary fety sambatra !.
Mindy russo dia hoy izy:
Mamaly an'i Mindy Russo
Mikasa ny hanao azy amin'ny faran'ny taona aho, mieritreritra aho fa miaraka amin'ireo voaloboka dia hifangaro tsara.
Manantena aho fa tianao i Tere. Tianay izany ao an-trano. Miarahaba sy tratry ny taona 2011
Caty lillo dia hoy izy:
Toa tsara izany! Saingy heveriko fa hanao fanovana kely aho .. te-hampitraka ny cava .. 100gr ve izany fa tsy rano sa hametraka zavatra hafa? Ary raha nanao izany tamin'ny ranomandry aho, ohatrinona Mila apetrako?!
Valiny tamin'i Caty Lillo
Ataovy miaraka amin'ireo akora rehetra ireo, apetraka eo amin'ny 200 gr ary araka ny hitanao dia afaka manampy kely kokoa ianao, fa jereo tsara foana ny fomba fijanonan'ny endriny, hisorohana ny fisiranana loatra.
tena tsara, tian'ny fianakaviako, tratry ny taona
Tsara ny valiny
Faly be aho, Fina!. Miarahaba sy tratry ny taona 2011!
CHRISTINA QUILES dia hoy izy:
Io, omaly alina rehefa nanandrana izahay sy ny vadiko, mahatahotra !!! =) Misaotra anao noho ny resinao, mahafinaritra izy ireo ary mazava ho azy fa mandalo miaraka amin'ny loko manidina ny sorbet mandarin !!!! hehehe Asa tsara ry zazavavy !!!!
Valio amin'i CRISTINA QUILES
Misaotra betsaka Cristina.
sipos dia hoy izy:
Salama zazavavy, tiako ny resipeo, mbola tsy nanao an'ity sorbet ity aho, fa tsy misy be ny manandrana azy hehe ..
Mamaly an'i sipos
Azo antoka fa tianao ity lehibe ity. Fiarahabana ary hilaza amintsika.
Miarahaba anao voalohany amin'ny resipeo tsara.
Te-haneho hevitra aho fa ny sorbet mandarin dia mahavariana, fa rehefa nihinana azy aho dia tena tsikaritra ny hoditr'ireo tangerine. Mety ho tsy notorotoroiko loatra io ?? Miarahaba ary misaotra
Tsy fantatro raha nanazava tsara ny momba ahy aho, mazava ho azy fa nopotsiko ireo mandarins, ny hoditra dia manarona ireo fizarana no tiako holazaina.
Torotoroy lava kokoa izy ary amin'ny atody fotsy dia mety ny firafitra ary tsy dia tsikaritra loatra ny hoditr'ilay faritra.
Silvia, somary tsikaritra izy ireo na dia tianay aza izany, fa ny reniko kosa manoto azy bebe kokoa ary manampy atody fotsy. Noho izany dia manana endrika tsara izy io.
Misaotra betsaka anao mamaly haingana. Mbola hanandrana azy indray aho, raha ny marina dia efa manana mandarin be dia be aho.
Lazao amiko hoe ahoana no fahombiazany aminao. Mirary ny soa indrindra
Eny, omaly dia nataoko vaky be kokoa izany ary nasiako ny fotsy ary mahafinaritra izany. Misaotra betsaka anao amin'ny resipeo.
Faly aho fa tianao ilay izy. Tsy maintsy nanatsara ny sasany tamin'izy ireo koa aho ary afaka milaza ny mahasamihafa azy.
Ny gilasy cookie dia nahafinaritra
misaotra betsaka, mahafinaritra ny recette, arahaba
Aiza izany fomba fahandro izany?
Salama, silobia, sorbet mandarin, fanontaniana tena tsara, mandra-pahoviana aho no manana tangerine ao anaty boaty, misaotra
Farafahakeliny telo volana tsy misy olana, dia mety hahavery tsiro aza izy io.
Nahita ny tranonkalanao ny sipako, ary omaly izy dia gaga tamin'ny sorarety mandarin, mummmm, tena matsiro, mahasalama, mamelombelona (na amin'ny volana Janoary aza) ary mora ny manamboatra azy ... tsy afaka mangataka bebe kokoa ianao. Misaotra anao.
Maria, faly aho fa tianao izany. Ny vadiko koa adala amin'ny sorbets ary ao an-trano dia manana voankazo mangatsiaka foana aho hanamboarana azy ireo.
Salama Silvia, manana fanontaniana aho ary manampy ny siramamy mivadika amin'ity lafiny ity, azoko apetraka aminy io azafady lazao ahy ny fomba anaovako azy, misaotra
Ana, tsy haiko hoe hanao ahoana. Tsy mbola nampiasa izany tamin'ny sorbets aho fa nampiasa gilasy. Eny, ny ataon'ny siramamy dia ny manampy raha ao anaty vata fampangatsiahana izy io mba hisorohana azy tsy hitera-bokatra ary misy endrika mamy. Na izany aza, ny sorbet dia vita amin'ny voankazo mangatsiaka na misy ranomandry ary lany eo noho eo. Tsy ilaina ny manampy ny siramamy mivadika.
Ma Jesosy dia hoy izy:
Salama, hitako ny bilaoginao ary tiako izany! Androany dia nahomby ny sorbet. Tohizo fa tovovavy !!!!
Valio amin'i Ma Jesus
Tongasoa eto amin'ny bilaoginay ary faly be aho fa tianao izany. Mirary ny soa indrindra
mmm tsy maintsy ho tsara. Hanohy hiteny aminao ny fomba fahandro ho an'ny cheesecake haingana satria omaly dia nataoko mora be tamin'ny zanako izany, nanampy ahy tsara ny zanako ... ronono litatra sy sasany, fromazy 8, siramamy 200, karamela ary cookie voatoto ho an'ny base bellocidad 5 maripana 90 fotoana 7 minitra ary mangatsiaka ao anaty vata fampangatsiahana, andramo dia lazao amiko.
Misaotra betsaka Elena, ity fomba fahandro ity toa tena tsara, mila manandrana ianao. Mirary ny soa indrindra
Silvia fanontaniana iray izay ahitako ireo loko vita amin'ny paty satria tsy tsara ny ranon-javatra tsy haiko hoe aiza no ividianana azy
Ana, tsy mbola nividy azy ireo aho fa indraindray henoko ao amin'ny vondrona facebook fa mividy an-tserasera ny olona. Hikaroka ao amin'ny google, azo antoka fa mahazo magazay an-tserasera ianao ary tsara dia tsara matetika.
stefa dia hoy izy:
ny fanaovana crème crème dia inona no tokony hatao? Esq tsy azoko hoe inona avy amin'ny k no tsy mametraka fotoana sy izany?
Mamaly an'i stefa
Mila potehinao fotsiny izy io, ary mivoaka creamier raha ampiana atody fotsy ianao. Tsy mametraka fotoana ianao satria miankina amin'ny haben'ny fizarana sy ny fampangatsiahana azy ireo, izay ilainao indraindray antsasaky ny minitra na latsaka.
Silvia avelako anao ny adiresy mailaka vaovao uchirubi@gmail.com
Maria Carmen Alonso dia hoy izy:
Salama daholo, tamin'ity fahavaratra ity dia nividy ny Thermomix aho, hiteny fotsiny aho fa iray indray amin'ny fitahiana ny ora nanapahako hevitra. Mbola eo amin'ny dingana andrana aho, fa faly. Nokolokoloina momba ny mofo soisa aho fa tsy hitako ny fomba fahandro. Afaka miteny amiko ve ny olona iray? Misaotra betsaka amin'ny zavatra rehetra.
Valiny tamin'i Mª Carmen Alonso
Salama M. Carmen. Izaho dia niaraka taminy nandritra ny fotoana fohy, ary amin'izay tiako hatao zava-baovao, io koa no fampiasam-bola tsara indrindra azoko natao. Manamarika ny fangatahanao izahay.
Wilfred dia hoy izy:
Ho an'ireo olona te hanandrana azy: ny voankazo misy masomboly, hoditra na kofehy, TSY tsara natao ho an'ny sorbet, mila manery azy ireo aloha ianao ary manala ny ranony.
Valiny tamin'i Wilfred
Misaotra tamin'ny fanoloran-kevitra nataonao Wilfred, hanandrana izahay !!
Salama!! Azonao atao ve ny manamboatra ny sorbet amin'ny ranom-boankazo fotsiny?
Salama Anna, tsy omeko soso-kevitra izy io satria tsy ho matevina noho izy tsy nanana ny fizarana mandarin ... misaotra anao nanoratra!
Sambo dia hoy izy:
Ho an'ny sorbet mandarin rehefa miteny ianao dia ampio ny tangerine mangatsiaka, ny voasarimakirana ary ny tangerine misy hoditra ihany koa, misaotra
Mamaly an'i Reme
Ny mandarinina sy ny voasarimakirana dia tsy misy hoditra ary tsy misy voa ary zava-dehibe ny tsy fananan'ny voasarimakirana ilay faritra fotsy manodidina azy koa. Ny hany zavatra nampiana mangatsiaka dia ny mandarins, ny sisa tsy ilaina.
Hilaza aminay ianao raha tianao izany.
Tsaroako fa manana ny clementines ao anaty vata fampangatsiahana aho ary koa ny voasarimakirana hanomako sorbet
Mahafinaritra tokoa, Tere. Lazao aminay izay hevitrao.
Firy ny tangerine efa voahitsaka?
Eny, efa voahitsakitsaka sy mivaingana izy ireo.
Mananasy mavokely sy malama betiravy
Nasiana asparagus fotsy misy menaka voasarimakirana